एकाविहानै आयो एउटा डरलाग्दो तथ्यको खबर, आखिर कहाँ गयो ३४ हजार हतियार ?
ARCHIVE, NEWSPAPER » एकाविहानै आयो एउटा डरलाग्दो तथ्यको खबर, आखिर कहाँ गयो ३४ हजार हतियार ?
काठमाडौं – स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले लाइसेन्स प्राप्त हतियार बुझाउन निर्देशन जारी गरे पनि करिब चौतीस हजारभन्दा बढी हतियारको अत्तोपत्तो छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा छ । गृहले लाइसेन्स प्राप्त हतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । गृहको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘निर्वाचन अवधिभर लाइसेन्स प्राप्त हतियार जिल्ला प्रसाशनमा राख्ने ।’